Saciid bin Zeyd - Wikipedia
Saciid bin Zeyd
(Waxaa laga soo toosiyay Sacad bin Zeyd)
Sacad Binu Zeyd R.C Waa sannadkii lixaad ee hijriyada kahor. Goobtuna waa magaallada Makka. Wuxuu Rasuulka (scw) ka sheeganayay dhibaatooyinkii iyo hagardaamooyinkii kaga imaanayay gaallada qureysh isaga iyo asxaabtiisa, isagoo uu Rasuulkuna (scw) waqtigaas ku howlanaa gaarsiinta iyo fidinta dacwada Islaamka.
1 Dhalasho farxad leh
2 Jaceylkii Rasuulka (scw) ee Usaama
3 Saxaabiga ugu da’da yar
4 Dagaalkii ugu horeeyay uu ka qaybgalo Usaama
5 Hoggaamiye ciidan
6 Guullo waaweyn
7 Dhacdo uusan Usaama weligiis hilmaamin
8 Mushaar dheeri ah
9 Maamuuskii Cumar ee Usaama
Dhalasho farxad leh[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Rasuulka (scw) oo ku sugan xaaladdaas, ayaa waxaa soo gaaray war ka farxiyay. Waxaa u yimid qofkii ku bishaareenayay inay Ummu Ayman ay dhashay wiil. Dhalashada wiilkaas ayaa waxaa si aad leh ugu farxay Rasuulka (scw), iyadoo ay wejigiisana ay si weyn u hareereesay farxaddaas. Taloow yuu noqon doonaa wiilkaas nasiibka badan ee uu dhalashaddiisa ku farxay Rasuulka (scw)? Haddaba, aqristow wiilkaas waa saxaabiga aan soo bandhigayno sheekadiisa. Waa saxaabiga la yiraahdo Usaama Binu Zeyd ee loogu magac dari jiray “kii uu jeclaa Rasuulka (scw)”.
Asxaabta lama aynan la yaabin sirta ka danbeysa ee keentay inuu Rasuulku (scw) ku farxo dhalashaddii Usaama Binu Zeyd. Maxaa yeelay waxay ogaayeen xiriirka qotada dheer ee uu Rasuulka (scw) la wadaagay waalidka Usaama. Usaama hooyadiis waxaa la yiraahdaa Barakatu Al-Xabasha looguna kunyoodo “Ummu Ayman”. Ummu Ayman waxay addoon u ahayd Aamina Bintu Wahab oo ahayd Rasuulka (scw) hooyadiis. Kolkii ay dhimmatayna hooyadiis waxaa Rasuulka (scw) barbaariyay Ummu ayman, iyadoo wanaajisay xanaanaynta Rasuulka (scw).
Jaceylkii Rasuulka (scw) ee Usaama[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Sidaa darteed, qaddarin iyo maamuus aad u weyn ayuu Rasuulka (scw) u hayay Ummu Ayman. Aad iyo aad ayuu u jeclaa. Wuxuu u ixtiraami jiray sida inay dhashay oo kale oo ay tahay hooyadiis. Wuxuu Rasuulka (scw) inta badan oran jiray hadal macnihiisu ahaa ” Ummu Ayman waa hooyaday marka laga reebo hooyaday kadib, waxay ka hartay ahlu-baytkayga”. Waa taa hooyadii sharafta badneyd ee dhashay wiilkii nasiibka badnaa ee uu sida weyn ugu farxay dhalashaddiisa.
Haddaba, haddaan ogaannay Usaama hooyadiis, waxaa misna habboon inaan baranno aabihii Usaama. Waa saxaabigii sidoo kale uu aadka u jeclaa Rasuulka (scw) ee la oran jiray Zeyd Binu Xaaritha, sidoo kalena aabihiis loogu magac dari jiray magaca Rasuulka (scw) kahor intuusan iman islaamka. Dhinaca kale, Zeyd wuxuu ka mid ahaa xog-hayeenadii Rasuulka (scw) ee uu sirahiisa ku qarsan jiray, sidoo kalena ku soo barbaaray gurigii Rasuulka (scw). Sharaf iyo wanaag waxaa Zeyd ugu filan in magaciisa lagu xusay qur’aanka kariimka ah, iyadoo muslim kasta oo aqriya qur’aanka xusayo magaciisa, isla mar ahaantaasna ajar iyo xasanaad ka helayo xuska iyo sheegitaanka magaciisa.
Saan horey u sheegnay, guud ahaan asxaabta Rasuulka (scw) waxay ku farxeen bishaaradii dhalashada Usaama Binu Zeyd farxad aynan sidiisoo kale ayan horey ugu farxin. Maxaa yeelay, tarbiyaddii ay ka qaateen Rasuulka (scw) ayaa tilmaamaysay inay ku farxaan dhammaan wixii farax geliya Rasuulka (scw), sidoo kalena ay dhibsadaan wuxuu dhibsado. Asxaabtii waxay ugu magac dareen Usaama magacan “wiilkii la jeclaa ee uu dhalay kii isna la jeclaa”. Bixinta magacaas kama aynan ahayn asxaabta mid ay macno la’aan ay isaga yiraahdeen, ee waxay u yiraahdeen maadaama uu jeclaaday Rasuulka (scw) sidaa si la mid ahna uu u jeclaa aabihiis Zeyd Binu Xaaritha ayeey magacaas ugu doorteen.
Saxaabiga ugu da’da yar[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Ilaahay ha ka raalli noqdee, wuxuu Usaama Binu Zeyd ka mid ahaa dhalinyaradii asxaabta ugu da’da yaraa, waxayna isku da’ ahaayeen wiilkii uu awoowga u ahaa Rasuulka (scw) ee la oran jiray Xasan ayna dhashay Faatima Bintu Rasuulillaah. Xasan Binu Cali wuu caddaa, muuqaal qurxoona wuu lahaa, wuxuuna aad ugu ekaa awoowgiis Rasuulka (scw). Hase ahaatee, Usaama maadaama ay hooyadiis ka soo jeedday Xabasha (afrika) wuxuu lahaa midab maariin, lehna san weyn, wuxuuna aad ugu ekaa hooyadiis Ummu Ayman.
Inkastoo ay saas kala ahaayeen, haddana Rasuulku (scw) dhinaca kalgacaylka iyo jacaylka kuma kala sooci jirin labada wiil. Rasuulka (scw) wuxuu labadiisa gacmood mid uu ku qaban jiray Usaama, markaasuu wuxuu saari jiray mid ka mid ah booddadiisa, halka gacanta kalena uu ku qaban jiray Xasan markaasuu isna wuxuu ku fariisan jiray booddada kale, markaasuu si wadajir ah u dhunkan jiray isagoo labadooda u duceenaya oo leh “Ilaahayoow waan jeclaaday ee adigana jecloow”.
Jacaylkii weynaa ee uu Rasuulka (scw) u qabay Usaama Binu Zeyd waxay gaartay inuu maalin maalmaha ka mid ah uu arkay Usaama oo yimid albaabkii guriga Rasuulka, markaasna uu wejigiisa dhaawac ka soo gaaray, uuna dhiig ka daadanayo. Wuxuu Rasuulka (scw) u baaqay xaaskiisa Caa’isha inay ka tirtirto ama ka masaxdo dhiigii ka socday wejigiisa, hase ahaatee ma aynan jeclaysan Caa’isha inay samayso. Rasuulka (scw) ayaa intuu istaagay ka masaxay oo ka tirtiray dhiigii ka socday Usaama, isagoo ku oranayayna hadallo naxariis leh oo uu ku dejinayay wiilkan yar ee dhaawaca soo gaaray.
Rasuulka (scw) siduu u jeclaa Usaama yaraantiisa, ayuu misna u jeclaa markii uu noqday dhalinyaro. Mid ka mid ah madaxda qureysh oo lagu magacaabi jiray Xakam Binu Xizaam ayaa u soo hadiyeeyay Rasuulka (scw) xariir aad qaali u ah oo uu ka soo gatay Yeman. Rasuulka (scw) ma uusan qaadan haddiyaddii. Hal mar ayuu gashaday, waxayna ahayd maalin jumco ah, dabadeedna wuxuu siiyay xariirtii Usaama, isagoo ku xaragoonaya uuna la socdo dhalinyaradii muhaajiriinta iyo ansaarta ayuu magaallada kula wareegi jiray. Usaama markii uu qaangaaray waxaa ka soo muuqatay sifooyinkii suubbanaa ee keentay inuu muteysto in loogu magac daro “kii uu jeclaa Rasuulka (scw)”.
Usaama Binu Zeyd Ilaahay ha ka raalli noqdee wuxuu lahaa caqli qoto dheer, geesinimo xad-dhaaf ah, xikmad uu ku kala miisaamo ummuuraha, dhowrsanaan oo aan aqbalin dulliga iyo daciifnimada, dadka soo jiita ayna dadka jecel yihiin, Alle ka cabsi badan oo ku dadaala xalaasha aadna u jecel Allihiisa.
Maalintii dagaalkii Uxud Usaama oo ay la socdaan qaar ka mid ah dhalinyarada asxaabta ayaa waxay u yimaadeen Rasuulka (scw), iyagoo markaas doonaya in loo fasaxo inay ka qayb galaan jihaadka. Rasuulka (scw) wuxuu dhalinyaradii ka qaatay qaar ka mid ah, halka kii aan qaan-gaarinna uu ka reebay ka qayb qaadashada jihaadka. Kuwii la soo celiyay waxaa ku jiray Usaama Binu Zeyd, wuxuu soo laabtay, isagoo labadiisa indhood ay ka burqanayaan ilmo badan, murugada uu ka naxay inuusan ka qayb gelin jihaadka.
Dagaalkii ugu horeeyay uu ka qaybgalo Usaama[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Markii la gaaray maalintii dagaalka Khandaq ama Axzaab, waxaa sidoo kale markale u yimid Rasuulka (scw) Usaama oo ay la socdaan qaar ka mid ah dhalinyarada asxaabta. Usaama ayaa si kor ahaan u qooraansaday, bal si loogu oggolaado inuu ka qayb galo jihaadka. Rasuulka (scw) ayaa u dabcay isaga, dabadeedna wuxuu u oggolaaday inuu ka qayb galo jihaadka. Isagoo shan iyo toban jir ah ayuu qaatay seefta isagoo jidka Alle ku duullaya.
Maalintii dagaalkii Xuneen, waa dagaalkii lagu jebiyay muslimiinta waxaa sugnaaday Usaama Binu Zeyd oo uu la socdo Cabbaas Binu Cabdil-Mudhalib oo ahaa Rasuulka (scw) adeerkiis iyo Abii Sufyaan Binu Xaaritha iyo lix kale oo ka mid ahaa asxaabta kuwooda ugu sharafta badnaa. Wuxuu Rasuulka (scw) awooday isagoo wata ciidankan tirada yar ee rumeysan Rabbigooda inay jabkii muslimiinta ay u rogaan gargaar iyo guul, iyo inay muslimiintii cararay ka badbaadiyaan dhagarta kaga iman gartay mushrikiinta.
Markii la soo gaaray maalintii dagaalkii Mu’ta waxaa sidoo kale dagaalamay Usaama Binu Zeyd isagoo garab socda calankii uu siday aabihiis oo ka mid ahaa hoggaamiyayaashii dagaalkaas ee ka koobnaa saddexda nin. Markaan uu Usaama dagaalamayo da’diisu ma gaarin 18 jir. Wuxuu si fool-ka-fool ah u arkay dilkii aabihiis oo ku shahiiday dagaalkii Mu’ta. Hase ahaatee ma laciifin oo ma niyad jabin, balse wuxuu sii ballaariyay dagaalkii uu waday isagoo hoos socday calankii uu siday Jacfar Binu Abii Daalib oo ahaa Rasuulka (scw) ina adeerkiis, jeer isna laga dilo oo uu sidaas ku shahiido. Sidoo kale, wuxuu garab istaagnaa hoggaamiyihii isla ciidankaas ee saddexaad ee Cabdillaahi Binu Rawaaxa jeer isna laga dilo oo uu dagaalka ku shahiido.
Usaama Binu Zeyd wuxuu ku soo laabtay magaallada Madiina, halka aabihiisna uu ku shahiiday dagaalka. Markii uu soo galayay magaallada wuxuu Usaama saarnaa faraskii uu aabihiis saarnaa markii la dilayay.
Hoggaamiye ciidan[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Sannadkii 11-aad ee hijriyada, wuxuu Rasuulka (scw) amar ku bixiyay in ciidan loo diyaariyo ciidankii roomaanka ee hoggaaminayay Hiraqle, wuxuuna ciidankaas ku daray saxaabada odayaashooda sida Abuubakar, Cumar, Sacad Binu Abii Waqaas, Abuu Cubeyda Binu Al-Jarraax iyo saxaabo kale oo fara badan. Wuxuu Rasuulka (scw) ciidankaas madax uga dhigay wiilkii xikmadda iyo caqliga badnaa ee Usaama Binu Zeyd, xilligaas iyada ahna da’diisu ma aynan dhaafin 20 jir.
Ciidankii oo ku jira is diyaarinta, ayaa waxaa xanuunsaday Rasuulka (scw), wuuna sii kordhay xanuunkii iyo cudurkii Rasuulka (scw) hayay. Sidaa darteed, ciidankii muslimiinta waxay dib u dhigeen duullimaadkii ciidanka, iyagoo doonayay inay ka war-dhooraan xaaladda uu ku danbeyn doonno Rasuulka (scw). Usaama wuxuu yiri “markii uu xanuunkii ku sii siyaaday Rasuulka (scw) waxaan u imid Rasuulka (scw), dadkuna way i soo raaceen. Markaan u soo galay, waxaan oggaaday inuu aamusay oo uusan hadli karin, xanuunka daran haya awgeed. Gacantiisa ayuu xagga samada kor ugu qaaday, markaasuu haddana anniga dusheyda saaray, waan gartay inuu ii duceenayo”.
Wax yar kamaba soo wareegan jeer uu markii danbe Rasuulka (scw) ka geeriyoodo, waxayna muslimiinta intaa kadib khilaafada u doorteen Abuubakar, dabadeedna howshii ugu horeysay ee lagu dhaqaaqo dowladdii Abuubakar waxay noqotay aaskii Rasuulka (scw) iyo inuu fuliyo amarkii Rasuulka (scw) ee ahaa in la diro ciidankii Usaama. Hase ahaatee, koox ka mid ah ansaarta ayaa waxay soo jeediyeen in dib loo dhigo arrinta ciidanka, waxayna ka codsadeen Cumar Binu Al-Khadaab inuu bal la hadlo Abuubakar, iyagoo ku yiri “haddii uu diido waxaan ka ahayn in ciidanka la diro, waxaad naga gaarsiisaa inuu talada ciidanka noogu dhiibo nin ka da’ weyn Usaama”.
Kolkii ay gaartay Abuubakar dhambaalkii uu siday Cumar ee ay soo jeediyeen koox ka mid ah ansaarta waxaa si aad leh uga carooday arrintaas Abuubakar. Fadhigii uu fadhiyay ayuu ka kacay markuu maqlay hadalkaas, kadibna wuxuu si caro leh u qabtay garkii Cumar Binu Khadaab isagoo ku yiri “hooyadaa ku weysay Cumaroow…, waxaa Usaama madax u doortay Rasuulka (scw) adigana waxaad i faraysaa inaan ka qaado jagadaas?! Wallaahi ayaan ku dhaartay inay dhacaynin taasi”. Cumar markii uu ku soo laabtay nimankii u soo dhiibtay dhambaalkaas, waxay weydiiyeen wixii uu la kulmay, wuxuuna ku yiri “iska taga oo baxa hooyadiin idin weysaye, anniga unbaa og wixii idinka dartiin aan kala kulmay khaliifkii Rasuulka (scw)”.
Ciidamadii uu hoggaaminayay wiilkii dhalinyarada ahaa waxay billaabeen inay anbabaxaan. Waxaa ciidankii sogeetiyay khaliifkii Rasuulka (scw) oo dhulka socdo, iyo Usaama oo saaran awrkiisa. Usaama ayaa ku yiri Abuubakar “khaliifkii Rasuulka Allow waxaan ku dhaaranayaa inaad halkan fuulayso annigana aan soo deggayo”. Abuubakar ayaa ku yiri “wallaahi inaadan soo deggayn, annigana aan koreynin.., “, kadibna sidii ayuu Abuubakar u sogootiyay ciidankii Usaama, isagoo u dardaarmay inuu fuliyo dardaarankii Rasuulka (scw). Dhinaca kale, wuxuu Abuubakar ka codsaday Usaama inuu Cumar u fasaxo inuu isaga la joogo, wuuna u fasaxay Usaama. Waa tusaale aad u wanaagsan oo aan ka baranayno ardaydii ka soo baxay madaaristii iyo hanuunkii Rasuulka (scw). Waa khaliifkii ama madaxweynihii muslimiinta ninka sidaas leh.
Guullo waaweyn[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Ciidankii uu hoggaaminayay Usaama Binu Zeyd ayaa sidii ku kicitimay, wuxuuna Usaama fuliyay dardaarankii uu faray Rasuulka (scw). Fardihii muslimiinta ay wateen waxay jaxaabeen ama ay cagta mariyeen magaalooyinka Balqaa ee ka tirsanaa falastiin iyo sidoo kale qalcada lagu magacaabo Al-daaruumi oo iyadana ka tirsan falastiin. Ciidankii Usaama waxay cabsi weyn ku abuureen ciidamadii roomaanka ee waqtigaas ka talinayay dhulka Shaam ee sidaan sheegnay uu madaxa u ahaa Hiraqle, iyagoo waddada u xaaray sidii ay u furan lahaayeen magaalooyinka kale ee ku yaalay Shaam iyo Masar iyo waqooyiga Afrika ilaa laga soo gaaro badweynta hadda loo yaqaano badweynta atlantic-ada.
Ilaahay ha u naxariistee Usaama Binu Zeyd wixii intaa ka danbeeyay wuxuu soo laabtay isagoo saaran faraskii uu lahaa aabihiis kadib markuu ku shahiiday dagaalkii Mu’ta, isagoo sidana markaas qanaa’imtii ama hantidii faraha badnayd ee ay intay muslimiintii fara badnideeda la yaabeen yiraahdeen “lama arag ciidan ka nabad gashoon kana hanti badnaa ciidankii uu hoggaaminayay Usaama”. Dhammaan muslimiintii ayaa qaddarin iyo maamuus weyn u hayay Usaama intuu noolaa oo dhan, isagoo lagu ammaanayay siduu u fuliyay ballamihii uu la galay Rasuulka (scw) iyo awooddii shakhsiyadeed ee uu lahaa.
Dhacdo uusan Usaama weligiis hilmaamin[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Inkastoo wacdarooyin fara badan uu wiilkii dhalinyarada ahaa ka muujiyay duulimaadyo badan oo uu muslimiinta kala qayb taaya dagaallo kala duwan, haddana waxaa dagaalladaas ku jiray mid uusan hilmaamin ama iloobin intuu dunida saarnaa oo dhan. Waxay ahayd labo sanno kahor intaanan la oofsan Rasuulka (scw). Wuxuu Rasuulka (scw) diray koox ilaalo ah oo gacanta ku soo dhigta gaallada kuwooda sida daran dhibaatada ugu hayay islaamka iyo muslimiinta. Kooxdaas ilaallada ahayd waxaa madax looga dhigay Usaama. Waa markii ugu horeysay ee uu Usaama hoggaamiye loogu dirto koox ciidan ah. Kooxdii ilaallada ahayd howshoodii waxay ku soo gabagabootay guul, guushaasna waxaa si weyn ugu farxay Rasuulka (scw). Bal Usaama laf ahaantiisa aan ka dhagaysano wixii uu dagaalkaas kala kulmay maalintaas.
Usaama wuxuu yiri: “waxaan u imid Rasuulka (scw) annigoo ugu bishaareenaya guushii aan helnay. Rasuulka (scw) wejigiisa waxaa ka soo muuqday farxad weyn, wuu ii soo dhowaaday, wuxuuna igu yiri bal ii waran. Waxaan billaabay inaan uga sheekeeyo siduu dagaalka u dhacay. Waxaan u sheegay markii ciidanka gaallada ay jabeen inaan gacanta ku dhigay nin ka mid ah iyaga, markaan warankii aan watay aan damcay inaan ku dilo ayuu yiri Laa Ilaaha Illallaah, hase ahaatee kama aanan dhageysan oo waan dilay. Markaan intaas iri, waxaa markiiba doorsoontay wejigii Xabiibka Rasuulka (scw), wuxuuna igu yiri maxaa kugu dhacay Usaama..!, maxaad ku oran doontaa Laa Ilaaha Illallaah??. Dhowr jeer ayuu hadalkaas ku soo celceliyay Rasuulka (scw) jeer aan ka jeclaado inaan diinta islaamka hadda koow ka soo billaabo, waxaana ballan ku galay inaan wixii hadda ka danbeeya aanan la dagaalamin qofkii ku dhawaaqa shahaadada ee yiraahda Laa Ilaaha Illallaah kadib markaan sidaas Rasuulka (scw) ka maqlay”.
Falkaas waxay Usaama u noqotay dersi uusan weligiis hilmaamin, taasoo tilmaamaysa caddaaladda iyo insaaniyadda Rasuulka (scw). Xitaa qofkii gaalka ahaa ee laga yaabayay inuu oraahdaas naftiisa ku badbaadinayay wuu diiday Rasuulka (scw) in la dilo kadib markii uu ku dhawaaqay shahaadada. Waa dhab inuu Usaama dhacdadaas ka qaatay dersi aad u weyn. Xilligii ay dhacday fidnadii dhexmartay Cali Binu Abii Dhaalib oo ay taageerayaashiisa weheliyaan iyo Mucaawiye oo isna ay weheliyaan taageerayaashiisa, waxaan og nahay inuu Usaama dhexdhexaad ka ahaa labadaas kooxood.
Inkastoo Usama ay ula muuqatay inuu xaqa la jiro Cali, haddana wuxuusan marna ku dhicin inuu seeftiisa ula baxo qof muslim ah oo rumeeyay Alle iyo rusushiisa. Qaar ka mid ah asxaabtiisa ayaa u yimid, iyagoo ku boorinaya inuu iyaga la safto, hadalladii cad-caddaa ee uu ku yiri waxaa ka mid ahaa “annigu la dagaallami maayo qof yiri Laa Ilaaha Illallaah”. Mid ka mid ah nimankaas ayaa ku yiri “soow Alle ma oran: la dagaallama jeer aan laga helin gaalnimo (fidno) una ahaato diintu dhammaan Eebbe (sw)..” aayadda 39 suuradda Al-anfaal. Usaama wuxuu ugu jawaabay “kuwaas laga hadlayay waa mushrikiinta, waana la dagaallanay jeer laga waayay fidno, diintuna dhammaan ay u sugnaatay Eebbe (sw)”.
Mushaar dheeri ah[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Dowladdii khilaafada Cumar, wuxuu Cumar uga qoray Usaama bankiga dhexe ee muslimiinta mushaar ka badan intii uu qaadanayay wiilkii uu dhalay Cumar ee la oranayay Cabdullaahi, isagoo Cabdullaahi arrintaas ka biyo-diiddanna wuxuu aabihiis ku yiri ” aabe, waxaad Usaama u qortay lacag gaaraysa 4000, halka aad annigana iga siisay 3000, mana arki waxa uu aabihiis uu adiga ku dheer yahay, dhinaca kalena isaga (Usaama) laf ahaantiisa wuxuu i dheer yahay ma jiraan”. Cumar ayaa wiilkiisa ku yiri “waxaad sheegtay waa kaaf-iyo-kala-dheeri, Rasuulka (scw) Usaama aabihiis ayuu ka jeclaa adiga aabahaa, isna (Usaama) ayuu Rasuulka (scw) adiga kaa jeclaa”. Markii uu hadalkaas maqlay Cabdullaahi wuu ku qancay hadalkii uu aabihiis ku yiri, isagoo ku raalli noqdayna qaybtii looga qoondeeyay bankiga dhexe ee muslimiinta.
Maamuuskii Cumar ee Usaama[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Cumar Binu Khadaab Ilaah ha ka raalli noqdee si goonni ah ayuu maamuusi jiray Usaama. Kolkii uu la kulmo wuxuu ku oran jiray “soo dhawoow amiirkaygow”, markii uu arko qof la yaabaya hadalkaasna wuxuu ku oran jiray “waxaa amiir iigu dooray Rasuulka (scw).” Sannadkii 54-aad ee hijriyada wuxuu Usaama isagoo aad ugu hilowsan ugu dheelmaday la kulanka Eebbe (sw), sidaasna ayuu ku geeriyooday.
Ugu danbeyntii, waxaan Ilaah ka baryaynaa inuu u naxariisto kana raalli noqdo Usaama Binu Zeyd, taariikhda islaamka way ku yareyd in la helo qof kulansaday sifooyinkii suubbanaa ee uu lahaa Usaama Binu Zeyd.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Saciid_bin_Zeyd&oldid=173789"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 4 Juun 2018, marka ee eheed 12:16.